NLDအလုပ်သမားရေးရာဌာနက ထုတ်ပြန်တဲ့ အလုပ်သမားနေ့ကြေညာစာတမ်း
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/30/20140အကြံပြုခြင်း
ပန်ပန့်ရဲ့ facebook နှင့် စာနယ်ဇင်းများကနေတဆင့်ပြန်လည်ရှင်းလင်းအသိပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/30/20142အကြံပြုခြင်း
၉၆၉ တံဆိပ် ကပ်ထားရင် ကွိုင် တော်တော်များများ ရှင်းရ မခက်ဘူး
အသေးဆုံးလေး ၂၀၀.. အလတ်စားက ၃၀၀.. အကြီးတွေက ၅၀၀.. ပါ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံကတော့ ဆိုဒ် မကြီးပေမယ့်
၅၀၀ ယူတယ် အစ်ကို။ ရေစိုခံတယ်၊ ပြန်ဖျက်ချင်လည်း လွယ်တယ်၊
အသားလည်း မနာဘူး အစ်ကို။
ဗိုလ်ချုပ်က ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က
ဗိုလ်ချုပ်သမီးလေ အစ်ကို၊ နှစ်ယောက်စလုံး နာမည်ကြီး လူကြိုက်များတယ် အစ်ကို၊
၉၆၉ တံဆိပ် ကပ်ထားရင် ကွိုင် တော်တော်များများ ရှင်းရ မခက်ဘူး အစ်ကို၊
ဒါတွေက ကျနော့်ဆိုင်အတွက် လိုအပ်ချက်တွေပါ အစ်ကို၊ စီးပွားရေးလုပ်တာ
အထာနပ်ရတယ်၊ ကျနော့်ဗီနိုင်းကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့လူတွေ ဟတ် ထိသွားရမယ်။
ကပ်ခွာ တက်တူး ထိုးပါဦးလား အစ်ကို..။
“ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးအတွက် လိုအပ်နေသည့် လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး နေရာ (၅)ခုအတွက် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးဌာနချုပ်ရုံး (ကြည်း)မှ ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိ စစ်သားငါးဦးအား အရပ်ဘက်သို့ ဦးစီးအရာရှိ အဆင့်ဖြင့် ခန့်အပ်ပြီး နောက်တစ်ရက်ခြား၍ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်ကြောင်း အစိုးရ ပြန်တမ်း၌ ပါရှိ်သည်။”
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/30/2014 1 အကြံပြုခြင်း
မနက် ၁၀ နာရီကျော်လောက်က မြောက်ဒဂုံ ၇/၈ လမ်းဆုံအနီးမှာPortie တစီးမီးလောင်
၃၀.၄.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၁၀၃၅ အချိန်တွင် ဒဂုံမြို့သစ် (အရှေ့ပိုင်း)မြို့မ
ရဲစခန်းမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊(၈)ရပ်ကွက်၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်းတွင် ယာဉ်(၁)စီးမီးလောင်နေကြောင်းသတင်းအရ မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူးတို့နှင့်အတူသွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ ယာဉ်မောင်း နိုင်လင်းသိန်း၊ (၂၃)နှစ်၊ (ဘ)ဦးမြင့်သိန်း၊ အလုံမြို့နယ်နေသူသည် ၄စ/---၊Toyota Porte ခဲရောင် ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်အား ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်းအတိုင်း (၇/၈)လမ်းဆုံဘက်မှ ဒဂုံတက္ကသိုလ်ဘက်သို့
မောင်းနှင်လာစဉ် ၁၀၃၀ အချိန် ဗိုလ်စောနောင်လမ်းထိပ်အရောက် အင်ဂျင်အပူရှိန်လွန်ကဲပြီး အင်ဂျင်ခန်းအတွင်းမှ မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ရာ ၀ိုင်းဝန်းငြိမ်းသတ်ခဲ့သဖြင့် ၁၀၄၀ အချိန်တွင် မီးငြိမ်းသွားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါယာဉ်မီးလောင်မှုကြောင့် ယာဉ်၏အင်ဂျင်ခန်းပျက်စီးကာ တန်ဖိုး
ယင်းကဲ့သို့ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အတွက် ယာဉ်မောင်းဖြစ်သူ
ပြစ်မှုပုဒ်မ ၂၈၅ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
စီအန်ပီစီ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်သမား နေအိမ်တွေဟာ လူမြင်မကောင်းအောင် နိမ့်ကျ
ကျောက်ဖြူမြို့နယ် မဒေးကျွန်းမှာ တရုတ် စီအန်ပီစီ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ် လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ မြန်မာ
အလုပ်သမားတွေ နေထိုင်တဲ့ နေအိမ်တွေဟာ လူမြင်မကောင်းအောင် နိမ့်ကျနေပါတယ်။
အဲ့ဒီနေရာမှာ ကလေး ၃၀၅ ယောက်ရှိပြီး ကျောင်းလည်း မရှိတဲ့ အတွက် ခလေးတွေက စာမသင်နိုင်ပါဘူး။
ဆေးခန်းလည်း လမ်းတစ်ဘက် ခပ်ဝေးဝေးမှာသာ ရှိပြီး တပတ်တစ်ကြိမ် ဖွင့်ပါတယ်၊ ဆရာဝန် မရှိလို့
သားဖွား ဆရာမကို အားကိုးနေရပါတယ်။
ပြင်ဦးလွင် အတက်လမ်း ၂၁ မိုင် viewpoint : Probox တစ်စင်း မီးလောင်
Minn Thein Htun
လယ်တီသိမ်ကို ဧပြီ ၂၉ ရက်နေ့က အပြီးတိုင် ဖြိုဖျက်လိုက်ပြီ
“အပြီးဖျက်လိုက်တာ တမှုန်မှတောင် မကျန်တော့ဘူး။ အပဲ့တွေ ပျက်စီးတဲ့ဟာ မှန်သမျှကို ကျင်းကြီးတူးပြီး ထည့်ပစ်လိုက်တယ်။” လက်ပံတောင်းတောင် စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်အစီရင်ခံစာအရ လယ်တီသိမ်ကို မူလ အနေအထား မပျက် ပြောင်းရွှေ့ရန် ဒေသခံများအားလုံးရဲ့ သဘောတူညီချက်နဲ့ တခြားနေရာကို ပြောင်းရွှေ့ရန် ပါရှိခဲ့ပေမယ့် ဧပြီ ၂၉ ရက်နေ့က လယ်တီသိမ်ကို အပြီး ဖြိုဖျက်ပြီး ပြောင်းရွှေ့ပေးခြင်း မရှိဘူးလို့ ဒေသခံတွေက ဆိုပါတယ်။
“အဲဒါလုပ်တာ ကုမ္ပဏီက မဟုတ်ဘူးဗျ။ အဲဒါ အစိုးရက လုပ်တာ။ ကျနော်တို့တော့ မသိဘူး။ နောက်ဆုံးအခြေအနေကို သာသနာရေးဦးစီးဌာနကို မေးမှ သိမယ် ထင်တယ်။ အခုအချိန်အထိ နောက်ဆုံး သတင်းမရဘူး။”
Nyo Nyo Han
လစာ ကျပ်၂၀၀၀၀/- ထပ်တိုးပြီးရတော့မယ်
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၆ နှစ်
လစာငွေက ကျပ် ၁၅၇၅/-
သူ့အိမ်မှာခိုင်းတဲ့ကောင်မလေးကို သူ ပေးရတာက ကျပ် ၅၀၀၀/-
၇၀၀၀/- ၈၀၀၀/- လောက်ဆို ကိုယ့်အသုံးစရိတ်လောက်နိုင်ကောင်းရဲ့လို့
ဟော ၇၅၀၀/- တဲ့
အဲဒီလိုနဲ့ ၈၀၀၀၀/- ၁၀၀၀၀၀/-
ခု ဒီနေ့ ၂၀၀၀၀/- ထပ်တိုးတော့
အိမ်က ပြန်တောင်းရတာ ၂၀၀၀၀/- သက်သာတယ်ဘဲမှတ်ရမလား
အရင်လိုဘဲ တလ နှစ်လကြာရင် ဒီထက်မက ထပ်ပြီးအိမ်ကပြန်တောင်းနေရဦးမှာလား
သူ့ရဲ့ စာဖိုမှူးဆောင်အလုပ်ထဲက ဖရဲသီးနဲ့ ပုံဖော်ထားတာပါ
ဖန်တီးရှင်နံမည်က Thein Naingပါ။။
အမျိုးဘာသာ သာသနာ့စောင့်လျှောက်ရေးဥပဒေတစ်ရပ်ဖြစ်သော အမျိုးစောင့်ဥပဒေအား အတည်ပြုရေး အဆိုပြုတင်သွင်းလွှာကိုနေပြည်တော် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၌လာမည့်ဇွန်လတွင် အဆိုပြုတင်သွင်းသွား မည် ဖြစ်ကြောင်းအရှင်ပါမောက္ခမှမိန့်ကြားသည်။
မွေးလာတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကလည်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ရမယ် ဒါကြောင့်အမျိုးဘာသာ သာသနာ့စောင့်လျှောက်ဖို့အတွက် ဦးဇင်းတို့ဘက်ကအမျိုးစောင့်ဥပဒေတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းဖို့ လွှတ်တော်ကို အဆိုတင်သွင်းခဲ့တာပါ။
လာမယ့်ဇွန်လမှာ လွှတ်တော်ကနေအတည်ပြုမပြုသိရ တော့မယ်။ ဦးဇင်းကတော့ အတည်ပြုပေးဖို့မျှော်လင့်တယ် ” ဟု မကွေးပရိယတ္တိစာသင်တိုက်မှ အရှင်ပါမောက္ခက မိန့်ကြားသည်။
၎င်းအမျိုးစောင့်ဥပဒေအား အချက်လေးချက်ဖြင့်ပြဌာန်းထားပြီး ယင်းအချက်များမှာ (၁)ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်၏ ရိုးရာလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း (၂)တစ်လင် တစ်မယား စနစ်ပေါင်းသင်းခြင်း(၃)ဘာသာတရားအား လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခြင်း (၄)ကလေးမွေးဖွားနှုန်း ကန့်သတ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။စင်ကာင်္ပူနိုင်ငံတွင် မည်သည့် ဘာသာဝင် ဖြစ်ဖြစ် တစ်အိမ်ထောင်လျှင် ကလေး(၂)ယောက်ထပ်ပိုမယူရ ဥပဒေတစ်ခုအားပြဌာန်းထားကြောင်းသိရသည်။
အမျိုးစောင့်ဥပဒေအား ပြည်သူများ၏ လက်မှတ် ၁သန်းထောက်ခံမည်ဆိုပါက လွှတ်တော်၌ အတည်ပြုမယ်ဟု ထုတ်ပြန်ထားသောကြောင့်ယခုအခါတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ပြည်သူများ၏ သဘောတူ ထောက်ခံချက် လက်မှတ် ၁ သန်းကျော်ရှိပြီး အမျိုးစောင့်ဥပဒေတွင် ပါဝင်သော
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင်အမျိုးဘာသာသာသနာ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်သြဝါဒစရိယဘဒန္ဒတိလောကာဘိဝံသလက်မှတ်ထိုး ပေးပို့ထားသော ဥပဒေ ၄ ရပ်ကို ဥပဒေပြဌာန်းပေးဖို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ထံ ပေးပို့ထားကြောင်း၊
၎င်းဥပဒေတွင် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ၊ တလင်တမယားစနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်လူဦးရေ တိုးပွားနှုန်း ထိန်းညှိခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေတို့ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/29/20140အကြံပြုခြင်း
မန္တလေးဟောပြောပွဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ၈၈ ခေါင်းဆောင်တွေ တက်ရောက်မည်
လာမယ့် မေလ ၁၈ ရက်နေ့ မန္တလေးမြို့မှာကျင်းပမယ့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ဟောပြောပွဲကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေ တက်ရောက်ဟောပြောမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲ့ဒီဟောပြောပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် လူများများဆန့်တဲ့နေရာရဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အန်အယ်လ်ဒီ ဥက္ကဌ ဦးတင်ထွတ်ဦးက ပြောပါတယ်။
"မေလ ၁၈ ရက်နေ့ကို လူထုဟောပြောပွဲလုပ်မယ်ဗျာ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၂ တုန်းကတော့ အောင်ပင်လယ်ကွင်းမှာ အဆင်ပြေခဲ့တယ်ဗျ၊ လူများများဆံ့တဲ့ကွင်းမျိုးရဖို့ ကျနော်တို့ ကြိုးစားနေပါတယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာမယ်ဆိုတော့ စည်စည်ကားကားရှိဖို့ ပိုများသွားပါတယ်၊ ဒါကြောင့် အစောပိုင်းက ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွေလုပ်ချင်တာတောင်မှ ထိန်းထားပြီးတော့ ဒီလိုပွဲမျိုးကို လူထုနဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပေါ့၊ ဖြစ်နိုင်ရင်ကျနော်တို့က အထက်ဗမာပြည် ကိုယ်စားပြုပွဲမျိုးဖြစ်အောင်ကို ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတာပါ"
အဲဒီလူထုဟောပြောပွဲဟာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းတို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ပူးပေါင်းစီစဉ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ ဟောပြောပွဲရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်တဲ့ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက် ဟောပြောကြမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဖွဲ့စည်းပုံကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက် ၃ ကြိမ်လောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုနေမျိူးဝေက မ.ဘ.သ မပေါ်ခင် ဇေကမ္ဘာနဲ့
ခုနောက်ပိုင်းဇေကမ္ဘာနဲ့ကိစ္စမှာ ဘယ်လိုတွေညှိနှိုင်းလိုက်လို့လည်းဆိုတာကို တော့ကျနော်
မကြာသေးခင်ကပဲ ဇေခင်ရွှေက မီဒီယာကို " သူအနေနဲ့လယ်မြေတွေပြန်မပေးနိုင်ပါဘူး"တဲ့
ဒီတော့ နေမျိူးဝေလုပ်ခဲ့တဲ့ လယ်သမားကိစ္စက
ရှုံးသွားတာလား ၊လျော်ပေးလိုက်တာလား ၊ အဖျားရှူးသွားတာလား ၊နာမည်ကြီးလွယ်မယ့်လမ်းကိုပြောင်းလိုက်တာလား ဆိုတာစဉ်းစားစရာတစ်ခုပါ။
ဒါကတော့သူ့ရဲ့နောက်ကြောင်းတချို့ပေါ့။ဒါတွေပြန်ပြောရတာဟာ သူကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ရပ်တည်ချက်ပြောင်းသွားတဲ့ အကြောင်းကိုစဉ်းစားချင့်ချိန်နိုင်အောင်လို့ပါ။
အဓိကပြောချင်တာ ခုမှစမှာပါ။နေမျိူးဝေက မ.ဘ.သ ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကုလား ၊ တရုတ် ၊အစိုးရ ၊အတိုက်အခံ အားလုံးကိုဗျင်းတာကိုတွေ့ရတယ်။
သူအများဆုံးဗျင်းတာက မူစလင်တွေကိုပါ။quran bible ကိုတောင်ဘာသာပြန်ပြီးဗျင်းတာပါ။
၁။ ဘာသာရေးအရ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကာကွယ်ချင်လို့လား ?
၂။ လူမျိူးရေးအရလား မုန်းတီးလို့လား ?
၃။ နာမည်ကြီးချင်လို့လား ?
၄။ တစ်ဦးတစ်ယောက်က ခိုင်းစေညွှန်ကြားလို့လား ?
ကျန်တဲ့ ၂ကနေ ၄အထိကတော့ တိုင်းပြည်အတွက်
ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကာကွယ်ဖို့လို့ပြောရအောင် သူကဘာသာမဲ့တစ်ဦးဖြစ်တဲ့အတွက် မ.ဘ.သ ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာသူမနေသင့်တော့ပါဘူး။
ဘာသာမဲ့ဆိုရင် အနေသင့်ဆုံးခေါင်းစဉ်က ဒီမိုကရေစီဘက်မှာနေရင်နေ မနေရင် ကုလားမုန်းတီးရေးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတပ်ပြီး
ဘာသာမဲ့တစ်ယောက်က (မဘသ) ခေါင်းစဉ်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာတော့ အန္တရယ်တစ်ခုလို့မြင်ပါတယ်။မဘသအတွက်လည် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပါတယ်။
သာ ကုလားကို တိုက်ခိုက်တာပါ အမုန်းတရားမပါပါဘူး။
ဘာသာမဲ့တစ်ယောက်က ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွဲပြီး hate speech
သက်သက် လိုက်ဟောနေမယ်ဆိုရင် အများအမြင်မှာတော့ အမျိူးဘာသာသာသနာအတွက်လို့ဆိုပေမယ့် သာမန်လူထုထဲမှာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် ပြသနာတွေရှိနိုင်ပါတယ်။
ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဆိုတာက ဘာသာတရားနဲ့အညီ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထိန်းပေမယ့် ဘာသာမယ့်တစ်ယောက်မှာက အထိန်းအကွတ်မရှိပါဘူး။သူ့စိတ်ထဲမှာအမုန်းတရားပဲရှိနေမှာပါ။ဒီတော့ အမှန်တရားဆိုတာလည်း
မဘသနဲ့ဝေးဝေးနေပြီးနဂိုလုပ်နေကျအလုပ်တွေကို ပဲဆက်လုပ်သင့်ပါတယ်လို့ ။မဘသကိုအရောင်မဆိုးသင့်ပါဘူး။
အောက်မှာ မလုပ်ပဲ တခြားနည်းလမ်းနဲ့သာလုပ်
သင့်ပါကြောင်း ရွှေနားတော်အပါး ပေါက်ကြားစေလိုပါတယ်။
(တချိန်က ကိုနေမျိူးဝေကိုလေးစားအားကျခဲ့သူ) ကနောင် မင်း